août 2019 – filazantsaramada
« Fa izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra » (Matio 23:12) Mety hanakana antsika tsy hiaiky heloka ny zavatra vitantsika na ny ezaka ataontsika samirery, ka mahateny isika hoe: izaho nanaraka ny lalana tsara, izaho nanao ny marina; koa raha handinitena isika, dia toa tsy mahita izay fahotana natao, fa toa tsara daholo […]
Publié parfilazantsaramada août 30, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FAMELAN-KELOKA, FIAINANA MANDRAKIZAY.
MAZAVA AO AMIN’NY MAIZINA.
« Ary tamin’izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra. » Matio 4:17 Hoy ny (Matio 4:16a): «Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe». Fantatsika fa «ny finoana dia avy amin’ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin’ny tenin’i Kristy» (Romana 10:17). Ny […]
Publié parfilazantsaramada août 16, 2019 août 16, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAZAVA AO AMIN’NY MAIZINA.
NY FAHAMARINANA AVY AMIN’ANDRIAMANITRA
“Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra, tsy amin’ny lalàna anefa, fa ambaran’ny lalàna sy ny mpaminany,” (Romana 3:21) Ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo dia nitandrina mafy ny lalàna. Niteny Jesosy fa “… Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalаna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy hianareo” […]
Publié parfilazantsaramada août 9, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FAHAMARINANA AVY AMIN’ANDRIAMANITRA
NY FIETREN’ I KRISTY SY NY FISANDRATANY
« Fa izany no nahafatesan’i Kristy sy nahavelomany indray, mba ho Tompon’ny maty sy ny velona Izy. » (Romana 14:9) Ny hamaha ny famatoran’ny faharatsiana sy ny famatoran’ ny fahotana no anton-dian’i Kristy tety an-tany. Ho an’izay manaiky ho vonjena ihany anefa ny famonjena. Afaka manompo zavatra hafa ny olona, ary mety atakalony an’ireny hatramin’i Jehovah Andriamanitra […]
Publié parfilazantsaramada août 5, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FIETREN’ I KRISTY SY NY FISANDRATANY